गृहमन्त्री बादल र उत्तर कोरीयाली राजदुत भेटवार्ता, के भए कुरा ? – Everest Dainik – News from Nepal
गृहमन्त्री बादल र उत्तर कोरीयाली राजदुत भेटवार्ता, के भए कुरा ?
काठमाडौँ, २९ असार । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग नेपालका लागि उत्तर कोरीयाका राजदुत किम योङ हकले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।
गृहमन्त्रालयमा भएको भेटवार्ता दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी सहकार्य र सहयोगको विषयमा केन्द्रीत रहेको थियो । भेटमा गृहमन्त्री थापाले पछिल्लो समय उत्तर कोरीयाले अमेरिका र दक्षिण कोरीयासँग बढाएको वार्ता र छलफलको स्वागत गर्दै त्यसको सफल परिणाम आउने आशा व्यक्त गरे ।
उनले देशभक्तिको लागि उत्तर कोरीया सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत भएको टिप्पणी गरे । गृहमन्त्री थापाले उत्तर कोरियाले गार्मेन्ट लगायतको क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास गरेको गरीरहेको आफुले सुनेको भन्दै त्यस्तो प्रविधि नेपालमा पनि भित्र्याउन आफुहरु इच्छुृक रहेको बताए ।
राजदुत हकले नेपाल र उत्तरकोरीयाको सम्बन्धको चर्चा गर्दै यसलाई थप उचाईमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमा रोजगारीका लागि आउने कोरीयाली नागरिक प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया झन्झटीलो हुँदा समस्या रहेको बताए । जवाफमा गृहमन्त्री थापाले सो प्रक्रिया सहज र सरल बनाउन तत्काल कदम चलिने बताएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
राजदुत हकले गृहमन्त्रीलाई सफल कार्यकालका लागि शुभकामना दिँदै केही दिनमा हुन गइरहेको राष्ट्रिय दिवसमा उत्तर कोरीया भ्रमणका लागि निम्तो दिए ।
ट्याग्स: Home Minsiter Badal, North Korea Ambassdor